Pôrtô Rikô: Politikam-Pananahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2017 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Ao anatin'ity lahatsoratra fanangonana ity, miizarazara ny hevitr'ireo bilaogera Pôrtôrikàna momba ny resaka maha-vehivavy, ny zo ara-pananahana ary ny mariazy pelaka.
Tonga tao Pôrtô Rikô ny adihevitra momba ny mariazy pelaka, toerana izay misy ireo vondrona Kristiana, tohanan'ireo Amerikàna mpanohitra ny fanalàna zaza sy ny mariazy pelaka, toy ny Alliance Defense Fund, mikatsaka ny hanovàna ny Lalàm-panorenana Pôrtôrikàna hamaritàna ny mariazy ho eo amin'ny lahy sy ny vavy irery ihany.
Atahoran'i Edwin Vázquez, manoratra bilaogy ao amin'ny Cargas y Descargas ho ataon'io fanovàna ny lalàm-panorenana io ho lasa “ara-drariny ny fanenjehana ireo pelaka sy ireo mpivady ara-dalàna miaraka mipetraka”. Anaty lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe “Ny Fitsaràn'ny Katolika ao Pôrtô Rikô” [es], tsipihany ireo zo sivily marobe tsy voahajan'ny Alliance Defense Fund ary hoy izy:
Tsy azontsika omen-dàlana ireo olona avy any ivelany tonga eto hamilivily ny LALAM-PANORENANTSIKA. Izao no hiandry antsika Pôrtôrikàna. Toa hitako eto ny ankamaroan'ireo mpanao lalàna eto amintsika hanampy ireo olona ireo. Voafaritra ny tsipika ary tsy misy toerana intsony ho an'ny tsy firaharahàna. Hiady ho an'ny zontsika.
Ilay bilaogera Nuyorican (New York + Puerto Rico) Mamita Mala dia nandeha mba nijery ilay Juno, sarimihetsika iray izay milazalaza momba ny tanora iray nitondra vohoka ivelan'ny fanambadiana. Reny tokantena, lahatsoratra iray no saintsaininy ary novakiany tao ny momba ny fomba mahatonga ireo sarimihetsika marobe tato ho ato miresaka vohoka tsy niriana ary manoso-kevitra hoe ny tsy hanaovana fanalàna zaza dia mitondra mankany amin'ny fiafaràna feno hasambarana:
Tany am-boalohany, taorian'ny nijereko ilay sarimihetsika, nihevitra ny hitondra ilay zanko 10 taona hijery ilay sarimihtetsika Juno aho. Saingy tampoka teo, nihemotra. Nisy resaka matotra nifanaovako tamin'ny zanako vavy momba ny resaka firaisana ara-nofo sy ny fitondrana vohoka ary ny fandrindràna fiterahana, saingy tsy noresahanay ny momba ny fanalàna zaza. Tena vonona ho amin'izany ve aho?
Hey Neny, inona izany fanalàna zaza? Efa nanao izany ve ianao?
Ummm eny, ary efa nihevitra ny hanàla anao aho.
Mazava loatra fa tsy hiteny izany aho, farafaharatsiny tsy amin'izany fomba mitratrevatreva izany fa mba karazana hafatra iray toy inona no tiako ampitaina amin-janako vavy momba ny olana iray tahaka izany? Indrindra indrindra fa ao anatin'ny taona iray izay mbola sarotra ho azy ny hahatakatra ny atao hoe fanalàna zaza, indrindra indrindra fa tovovavy hafa fihodirana. Indrindra indrindra fa ao anaty kolontsaina iray izay efa mijery sahady ireo tovovavy ao aminy ho toy ny kilalaon'ny firaisana ara-nofo fotsiny izao, ary amin'izay fotopisainana izay ihany dia miandrandra ny hahita ny lohalik'izy ireny hihidy aminà gadona reggaeton iray.
Ao amin'ny Tinta Digital, Eugenio Martínez Rodríguez manontany tena [es] raha toa ireo singantsingany vaovao amin'ny resaka fiarovana ny maha-vehivavy ao Pôrtô Rikô ka tena latsaka ambany kelin'ny fitovian'ny vehivavy oharina amin'ny fahambonian'ny vehivavy. Manontany izy raha mety hisy fanentanana iray hanoherana ity fomba fandikan'ny vehivavy ny “machismo” ity, tsy ampidirana ny resaka fitakiana fitovian-jo ataon'ny vehivavy. “Inona no safidy hafa azo raisina? Tsy hanao na inona na inona ve?” hoy izy manontany.